GS-3015CEG / GS-4020CEG Full ezivaliweyo Fibre Laser Cutting Matshini ne Exchange - China Dongguan Glorystar Laser
GS-3015CEG / GS-4020CEG Full ezivaliweyo Fibre Laser Cutting Matshini ne Exchange
Kunokuba usike iityhubhu kunye nezinto Sheet. Kwaye netheyibhuli auto wotshintshiselwano, oku konga ixesha iyalayisha. Iimpawu Product ● Nge kuyilo ngokupheleleyo ebiyelweyo ndana, ukunciphisa laser radiation kwaye uphephe nayiphi na ukwenzakala ngoomatshini. ● Abantu Wabenza lo worktable exchangeable ukugcina ekulayisheni nokothula ixesha, kwaye chieve kakuhle umsebenzi omkhulu. ● ngqo ukugaya iimpahla kunye nezixhobo nedawo High, ingxolo ephantsi ngqo phezulu. Yahlula tube ukusika isixhobo kushishino osebenzayo Luphawu kusetyenziswa kuzo zonke iintlobo amashishini iimveliso metal ...
Kunokuba usike iityhubhu kunye nezinto Sheet. Kwaye netheyibhuli auto wotshintshiselwano, oku konga ixesha iyalayisha.
● Xa kuyilo ngokupheleleyo ebiyelweyo ndana, ukunciphisa laser radiation kwaye uphephe nayiphi na ukwenzakala ngoomatshini.
● Abantu Wabenza lo worktable exchangeable ukugcina ekulayisheni nokothula ixesha, kwaye chieve kakuhle umsebenzi omkhulu.
● ngqo ukugaya iimpahla kunye nezixhobo nedawo High, ingxolo ephantsi ngqo phezulu.
Yahlula device tube ukusika
Ikakhulu kuzo zonke iintlobo zezixhobo kwiphepha metal non-contact ukusika fast, nokukrola. kunye ukubhola, ezifana carbon intsimbi, intsimbi engatyiwa, ingxubevange, manganese sentsimbi, iqaqanjiswa, i-aluminiyamu, yobhedu umbhobho metal processing, etc
amandla laser 1000W To 10000w (Uyazikhethela)
indawo ukusebenza 3000 * 15000mm / 4000 * 2000mm
power seyiyonke <18KW
indlela yokudlulisa Gear kunye leposi, umqhubi Double
Previous: Enoqoqosho Fiber Metal Laser Cutting Machine kaWonke-3015
Okulandelayo: Full Ngaphakathi Exchangeable Worktable GS-6015CE
1000watts Fiber Laser umsiki
1000watts Fibre Laser Cutting Machine
Fibre Laser Cutting 1000w
Fibre Laser System 1000watts
Enoqoqosho Fiber Metal Laser Cutting Machine kaWonke ...
Uhlobo Open Fiber Metal Laser Cutting Machine GS -...
F-6018T Tube / Pipes Fibre Laser umsiki